होलीमा देश @ घरघरमा पानीको मुहान ! | शहरबाट शब्दहरु
« हराएकी सबिनाको खोजी, अब ईन्टरपोललाई जिम्मा
कतार पुग्न तिरिएको पैसा कसले खान्छ त ? »
होलीमा देश @ घरघरमा पानीको मुहान !	मनका लहर पानीमय भएका छन् । परिवेश र समय होलीमय बनेका छन् । रंगीन शुभकामना अनि उत्साहहरु रंगमय देखिएका छन् । हुनपनि निकै समय पश्चात् होली दैलौमा टेकेको अनुभव संगालीरहेको छु । होली रंगविहिन हुने कुरै भएन र यो मनविहिन हुनु पनि हुन्न । किनकी होलीमा आत्मियता पुवर्क एकअर्कामा मनका सम्बन्घ साटिन्छ सँगसँगै होलीका रंगहरु । यतिखेरको होली खुशी यसकारणले पनि होला किनभने म स्वदेशबाट दुई बसन्त बाहिरिएको थिए । तत्कालीन बिदेश बँसाईमा महसुस गरिनु त परि जाओस् । कहिले कुन पर्व आयो कुन गयो । अनभिज्ञ परिवेश उतै नेपालको विमानस्थलमा छोडेको थिए । विदेशमा आखिर के हुनु र आर्थिक उन्नतिका सोच अनि आरामीको कैयौ समयहरु । हुन त सहज पनि छैन विदेशमा काम । अपवाद भन्दा पनि हजारौ अनुमानबिनाको आँकडामा म प्रस्तुत भईरहेको छु अहिले यतिखेर ।
कहिल्यै पनि मिठा कुरा सुनाउन नथाकेका प्रेमी र सुन्न हतारिएका प्रेमिकाको असन्तुलित जोडीले राजधानीका दर्जनौं सम्पदा क्षेत्र प्रेममय स्थलमा परिणत भएको छ । खुल्लमखुल्ला बहकिएका अधैर्य जोडीहरुको आधुनिक लीलाका दृश्य हेर्ने नसकेर यात्रुहरु आफ्नै खुट्टाका जुक्ता हेरेर हिड्न बाध्य छन् भने सम्पदामा कोरिएका ऐतिहासिक देव आसनका यौन बुट्टाहरु जोडीका काल्पनिक साक्षी बनिरहेका छन् । सन्दर्भ होली कै हो । म होलीको हालखबरतिरै केन्द्रित हुन चाहन्छु । आज पनि बिहानी भयो । घामको आगमनसँगै छतमा स्थानीयहरु देखिएका छन् । तर हिजैको रुपमा होईन । आज हातमा बैलुन र प्लाष्टिक लिएर । अब वरिपरिबाट आक्रमणको बिगुल फुकियो । अनि हानाहान भयो बैलुनको । शहरमा देखिएको होलीको यो दृश्य गजब रमाईलो थियो । सदा पानीको समस्यामा कराउने र लँडाई गर्नेहरु छतमा बाल्टीनका बाल्टीन पानी ओसारेका थिए । त्यही टोल हो जुनले हरेकपटक पानीको समस्या देखाउँदै आएको थियो । जसका घरका धाराबाट पानी कमै मात्र आउँन्थ्यो । तर यस्तो पानी सदुपयोगले शहरबाट शब्दहरु कोर्ने बाध्य बनाएको छ । टोलकै ईनारबाट पनि पानी झिकिएको होला । तर त्यो ईनारको पानीले दैनिकी चल्दैन थियो । तर आज त्यही पानीबाट रमाएका थिए छतमा उत्रिएका युवा र युवतीका दर्जनौ जमात । सफासुग्घरको नारालाई प्राथमिकता दिने उनीहरु ईनारको त्यस्तो फोहरपानीमा रमाएका त थिएनन् । आफैलाई प्रश्न गर्ने बाध्य भएँ के प्रत्येक घरमा होली भनेर खानेपानीले पानी वितरण गरेको हो की वा घरघरमा मुहानै छ कतिका बैलुन निशानामय बन्यो । कतिका भने आत्मघाती पनि भए ।
युद्धबिरामको शंखघोष पनि गरियो तर पानीको पर्याप्तताले त्यो धैरैबेर कायम रहेनन् । पानीको हाहाकार रहेको यो परिवेशमा धन्न पानीको जगेर्ना र प्रस्तुतीले मन पनि भिजेको छ । होलीको दृश्य स्वादमा आँखा आन्नदित बनेको छ । होली संस्कृति जोगाउनका लागि हाहाकार भएको पानी पनि यति सहजै खर्चिएको देख्दा एउटै निष्कर्ष आयो । धन्न नेपालीहरु । आफ्नो संस्कृतिलाई संरक्षण त गर्दा रहेछन् । राजधानी बिहानैदेखि पानीमय । होलीका लागि स्थानीयले अघिल्लो साँझै पानीको जगेर्ना समेत गरे । राम्ररी घाम नलाग्दै होली पानीको खन्याई सँगै प्रारम्भ भयो । छतमा स्थानीयहरुका परिवारजन देखिएका छन् । तर हिजैको दृश्य बोकेर होईन । आज हातमा बैलुन र प्लाष्टिक लिएर । अब वरिपरिबाट आक्रमणको बिगुल फुकियो । अनि हानाहान भयो बैलुनको । शहरमा देखिएको होलीको यो दृश्य गजब रमाईलो थियो ।
यही पानीले गल्ली र बाटोमा हिड्नेहरु भिज्न पुगे । धारामा पानी कमैमात्र आउने गुनासो बोकेका स्थानीयहरुले होलीको अवसरमा ईनारका पानी समेत प्रयोगमा ल्याएँ । ईनारको पानी पर्याप्ततामा स्थानीय युवाका माहौलले मजाले आफुपनि भिजे र भिजाए पनि । होलीको यही हालमा कतिले कमाल देखाए पनि । बिना हेल्मेट मोटरसाईकल पनि गुडाए । पानी पानी पारे सडक र गल्लीलाई । नखेल्ने भन्नेहरु पनि उत्रिए । फोहरै पानी खन्याईयो सबैमा ।
सदा पानीको समस्यामा कराउने र लँडाई गर्नेहरु छतमा बाल्टीनका बाल्टीन पानी ओसारेका थिए । त्यही टोल हो जुनले हरेकपटक पानीको समस्या देखाउँदै आएको थियो । जसका घरका धाराबाट पानी कमै मात्र आउँन्थ्यो । तर आज ईनारको पानी प्रयोगले गुनासोमुक्त भएर भिजे र भिजाए । अनि होलीको निशानामा छिमेकी परे भने आक्कलझुक्कल भिज्न जोगिएर हिडेकाहरु निशानामा परे । कौसीबाट होलीका लागि रंगहरु फालिएन । न त कुनै अबीरहरु । सबै पानीकै धुनमा । पानी फाल्ने र भिजाउने ध्याउन्न व्यग्र देखिन्थे । सफा पानीका हकमा पानी कालै थिए । यही पानीले गल्ली र बाटोमा हिड्नेहरु भिज्न पुगे । धारामा पानी कमैमात्र आउने गुनासो बोकेका स्थानीयहरुले होलीको अवसरमा ईनारका पानी समेत प्रयोगमा ल्याएँ । ईनारको पानी पर्याप्ततामा स्थानीय युवाका माहौलले मजाले आफुपनि भिजे र भिजाए पनि । होलीको यही हालमा कतिले कमाल देखाए पनि । बिना हेल्मेट मोटरसाईकल पनि गुडाए । पानी पानी पारे सडक र गल्लीलाई । नखेल्ने भन्नेहरु पनि उत्रिए । फोहरै पानी खन्याईयो सबैमा ।
होली जमातका एक भीडले झन साबुनको प्रयोगले अर्काे पक्षलाई मजाले दल्यो । बैलुन भन्दा सजिलो प्लाष्टिकमा विविधथरिका रंग मिसाएर यात्रुलाई हानियो । यसरी मनाईएको होलीको हाल खासै राम्रो भएन । तरपनि संस्कृति संरक्षणको हकको दृष्टिमा यो उपयुक्त छ वा छैन । कसले बोल्ने फोहरपानी र ईनामेलको प्रयोगले शारीरिकरुपमा कस्तो असर पार्छ कसले सम्झाउने होलीको रमाईलोमा देश समेत रंगीन भएको छ । होलीमय यात्रामा युवामात्र नभएर युवतीहरुका सहभागिता पनि ज्यादा थियो । शहरका सडकभर एकछत्र भएर हिडेका होली जमातहरु बढेका थिए । सडकमा कमैमात्र सवारी साधन गुड्यो । होलीको नाममा विभिन्न पदार्थहरु प्रयोग बढेको देखियो । वास्तवमा होलीपर्बको नाममा यस्तो विकृति भरिएको कि्रयाकलाप उपयुक्त छैन । यसका लागि होली संरक्षण भनेर उत्रिने जमात आफैले मनन गर्नुपर्छ ।
कसैलाई हानी पारेर होलीलाई जगेर्ना गर्नुहुन्न । होली आत्माको आन्नदित आभाष पनि हो । त्यसैले होलीको वर्तमान हाललाई त्यागेर सद्भावपूर्वक कामना गरेर मात्र मनाए ज्यादा रमाईलो बन्नेमा कुनै सन्देह छैन । कतिका बैलुन निशानामय बन्यो । कतिका भने आत्मघाती पनि भए । युद्धबिरामको शंखघोष पनि गरियो तर पानीको पर्याप्तताले त्यो धैरैबेर कायम रहेनन् । पानीको हाहाकार रहेको यो परिवेशमा धन्न पानीको जगेर्ना र प्रस्तुतीले मन पनि भिजेको छ । होलीको दृश्य स्वादमा आँखा आन्नदित बनेको छ । होली संस्कृति जोगाउनका लागि हाहाकार भएको पानी पनि यति सहजै खर्चिएको देख्दा एउटै निष्कर्ष आयो । धन्न आफ्नो संस्कृतिलाई संरक्षण त गर्दा रहेछन् ।
This entry was posted on मार्च 2, 2010 at 3:08 अपराह्न and is filed under म र मेरो कुरा, मेरो लेख. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	ट्यागहरु: पानीको मुहान, होली	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.